Posted by ဇနိ at 1:12 AM
မြရွက်ဝေ July 22, 2008 at 4:04 AM
ဟား---ဟား--- ကိုဇနိကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ကျန်နေတာတွေရှိသေးတယ် ကိုဇနိရေ! ခုကိုးရီးယားကားတွေ ခေတ်စားလာတော့ ကိုယ့်ရည်းစားကို "အိုပါ့"လို့ ခေါ်တဲ့သူတွေလဲ သူငယ်ချင်းထဲမှာ ရှိတယ်ရှင့်။ ကိုတွေ မောင်တွေက ဟုတ်ပြီ၊ မိန်းကလေးကို ဘယ်လိုပြန်ခေါ်တာလဲဆိုတာ ကျန်သေးတယ်လေ။
စကားပြောရင် ယောင်တာတော့ အတော့ကို မလွယ်ဘူး။ ဟီး ကျမတော့ အမေ့ကို တခါမှ မယောင်ဘူးလို့ တော်သေးတယ်။ :P
ကိုရင်ညိန်း July 22, 2008 at 4:36 AM
ကျွန်တော် ကောင်မလေး ရရင်တော့ တရုတ်လိုပဲခေါ်ခိုင်းတော့ မယ် `သာကော´ လို့
ဒါမှမဟုတ် မြန်မာမှု့ပြုပြီး ` သာခေါင် (ဂေါင်)´
ပေါ့ အဟေးဟေး အဲလိုဆိုရင်တော့ ဘာများဖြစ်မလဲ မသိဘူးနော :P
မဇနိ July 22, 2008 at 5:02 AM
ကိုဇနိကတော့ အထုခံချင်နေပြီထင်တယ်နော်။ ဒီက မအားလို့ ဘလော့ဂ်ကို မလာနိုင်တာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး စာတွေရေးနေတယ်။ ဟင်း ဟင်း။ တွေ့ကြသေးတာပေါ့နော်။
တားမြစ် ထားသော... July 22, 2008 at 8:52 AM
အော်.. တတ်နိုင်ကြပါပေ့။ ချစ်သူရှိသူတွေများ သုတေသန စာတမ်းတွေတောင် လုပ်နေရပြီ။ အားငယ်တယ်။ တစ်ကယ်ပဲ။း(
ကိုးကားစရာတော့ရတာ ပေါ့လေ။ ဒါနဲ့ ကိုဇနိကရော မဇနိကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျ။ ကောင်လေးတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကနေ ရလာတတ်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ဝေမျှအုံးဗျ။
တားမြစ် ထားသော... July 22, 2008 at 9:05 AM
ဟာမေ့သွားတယ် ဒါကျတော့ မဇနိရဲ့ စာတမ်းဖြစ်ရမှာနော်။ မဇနိရေ အားရင် ကိုဇနိလိုပဲ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေနဲ့ စာတမ်းလေး ဝေမျှအုံးနော်။ လေ့လာသူတွေကတော့ သိချင်လှပေါ့။း)
မောင်ဖြူ July 22, 2008 at 9:28 AM
ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်မှ လက်ထောက်ချသတင်းပို့ချက်အရ သိရှိရသည်မှာ၊ ကိုဇနိ၏သုတေသနစာတမ်းမှ သုတေသနပြုခံသူငယ်ချင်းစာရင်းထဲတွင်၊ ကိုဇနိကိုယ်တိုင် နေရာအတော်များများတွင်ပါဝင်နေပြီး၊ သူ၏ကိုယ်တွေ့များမှာ စာတမ်း၏ ၅၀%ပါဝင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ :P အဟီး အတည်နောက်တာနော်။ :D
tmn July 22, 2008 at 11:58 AM
ကိုဇနိကတော့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုယူလိုက်တယ်မသိ ... ပို့စ်တစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးတတ်ပဗျာ...
အင်း... ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ ဖြည့်စွက်ရေးလိုက်တာလားဗျ..အဟဲ... :P(စတာနော)
ငပိန် July 22, 2008 at 12:14 PM
အိပ်ရင် ထထရောင်တာရော မပါပါ့လား..ဇနိရော..မေ့ကျန်ခဲ့တာဆိုလည်း..တခြားခေါင်းစဉ်နဲ့ ထက်ရေးအုံး...
Republic July 22, 2008 at 1:43 PM
သုတေသန ဇယားကိုတော့ ကဘောကျသွားပီ ..ကိုဇနိ ရေ ၊၊ တိုက်ဆိုင်ခဲ့သလိုလို ..ဘာလိုလို ..ညာလိုလို ..နေကြာကွာစိ ..ဟီး ၊၊
hhh July 22, 2008 at 1:52 PM
"နံပတ် ၁၀ ကမှားနေပါတယ်... ကြောက်ရတာဘယ်သူလဲဆိုတာ.. :P "
mathetzin July 22, 2008 at 1:52 PM
ဂျစ်တူး - gyit_tu July 22, 2008 at 3:25 PM
ကိုဇနိရေ .. ရယ်ရတယ် အဟား ။ ကိုဇနိက မဇနိကိုကျတော့ ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်း)
khin oo may July 22, 2008 at 3:25 PM
nu-san July 22, 2008 at 3:32 PM
ကိုဇနိရေ.. စာအရေးအသားကောင်းလွန်းလို့ တဟားဟားနဲ့ကို အော်ရီနေရတယ်.. :D
အဟီး.. အမလည်း အရင်ကဆို အိမ်နဲ့ဖုန်းပြောရင် ယောင်ပြီးပြောမိလို့ မနည်းဘရိတ်အုပ်နေရတယ်.. :D
ကဲ.. မဇနိရေ.. အားရင် အခေါ်အဝေါ်ကိစ္စလေးတွေ ရေးပါဦးနော်... :)
May Moe July 22, 2008 at 6:27 PM
နံပတ် ၆ နဲ့တူသလိုလိုပဲ ဟီးဟီး ရှူး သွားမပြောနဲ့နော် :P ဟဲဟဲ နိုင်တယ်ရှုံးတယ် မဟုတ်ပါဘူး ညီတူညီမျပေါ့ နော့
မေအောင် July 22, 2008 at 6:48 PM
လက်ဖက်သုပ် ကျွေးရမယ်နော မယ်နိ။
- July 22, 2008 at 7:44 PM
သုတေသနပြုချက်တွေအရ လွဲမှားမှု မရှိပါဘူး။ တစ်နေ့တာ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးပို့စ်တစ်ခု ပါပဲ။ ဆက်အားပေးနေပါတယ် အစ်ကိုရေ..
ပန်းခရမ်းပြာ July 23, 2008 at 5:11 AM
သုတေသန ဇယား(၁) ကိုတော့ ကြိုက် သွားပီ ..ကိုဇနိ ရေ ၊၊ မဇနိရေးမဲ့ ဇယား(၂) ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်။
Anonymous July 24, 2008 at 3:10 AM
very funny... interesting... good
နိုင်းနဒီ July 24, 2008 at 7:03 PM
အဟိ. သူတေသနကလည်းနော်. ဒင်းတို့အတွက်ချည်းပဲလားမသိဘူး. :P
Pinkgold July 24, 2008 at 7:47 PM
တော်တော် သုတေသန လုပ်ထားတာပဲ
မီးတို့က ကံဆိုးတယ်.. ရည်းစားကို ရှိသေးဘူး.. ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတောင် ခေါ်လို့မရဘူး အိအိ
မောင်မျိုး July 29, 2008 at 8:43 AM
တော်တော် လေ့လာထားတာပဲ ကျေးဇူး ကိုဇနိး) ဟိဟိ အစ်ကိုလည်း မွမ်းမွမ်းမွမ်းလားဗျ ဟီးးးဟီးးး